Barcelona oo dooratay midkii ay soo qaadan laheyd Coutinho iyo Dybala (Xitaa waxay dejisay qorshe cajiib ah) | Garqaad News Agency
Barcelona oo dooratay midkii ay soo qaadan laheyd Coutinho iyo Dybala (Xitaa waxay dejisay qorshe cajiib ah)
Barcelona ayaa isku diyaarineysa inay haatan soo iibsato bedelka Neymar JR ee rasmiga ah ka dib markii 25 sanno jirka reer Brazil uu heshiis rikoorka adduunka ah kula biiray kooxda PSG ee dalka France.
Wararka kasoo baxaya dalka Italy waxay haatan tilmaamayaan inay La Blaugrana si weyn u dooneyso xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Juventus Paulo Dybala.
Wargeyska La Gazetta dello Sport ee dalka Italy ayaa sheegaya inay Barcelona isku diyaarineyso inay dalab rasmi ah ka gudbiso xiddiga heerka caalami ee dalka Argentina.
Barcelona ayaa diyaar u ah inay Juventus farta ka saarto xiddigaheeda qadka dhexe Andre Gomes oo u dhashay dalka Portugal iyo Rafinha oo reer Brazil ah iyo weliba qiimo lacageed kaash si ay ugala soo wareegto Paulo Dybala.
Warbixintaan ayaa sheegeysa inay Barcelona go’aansatay inay u weecato saxiixa Dybala ka dib markii ay lasoo saxiixan weysay xiddiga garabka uga ciyaara kooxda Liverpool iyo qaranka Brazil Philippe Coutinho.